Sanatariin Ameerikaa Oromoof dubbatan; Ambaasaaddiriin Itoophiyaa dhiigaan Oromoo immoo warra Oromoo miidhuuf dhaabbatan. Senator Franken headed to Ethiopia to discuss plight of the Oromos and Somali refugees | OromianEconomist
Sanatariin Ameerikaa Oromoof dubbatan; Ambaasaaddiriin Itoophiyaa dhiigaan Oromoo immoo warra Oromoo miidhuuf dhaabbatan. Senator Franken headed to Ethiopia to discuss plight of the Oromos and Somali refugees	August 22, 2015